Hesekiel 30 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
30 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Onipa ba, hyɛ nkɔm na ka sɛ,+ ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Muntwa adwo, ‘Hwɛ, ɛda no reba!’+ 3 Na ɛda no abɛn, Yehowa da no abɛn.+ Na ɛbɛyɛ omununkum da,+ amanaman no bere.+ 4 Nkrante bɛba Egypt so,+ na sɛ nnipa totɔ nkrante ano wɔ Egypt, na wɔfa n’ahode dwiriw ne fapem a,+ yawdi kɛse bɛba Etiopia. 5 Etiopia,+ Put,+ Lud, ne firamanfiramanfo+ nyinaa, ne Kub, ne apam asase sofo nyinaa bɛtotɔ nkrante ano.”’+ 6 “Nea Yehowa aka ni, ‘Egypt akyigyinafo nso bɛtotɔ, na ne tumi mu ahantan bɛbrɛ ase.’+ “‘Na wɔbɛtotɔ nkrante ano afi Migdol+ akosi Sine,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 7 ‘Na wɔbɛdan amamfõ mu amamfõ na ne nkurow ada mpan wɔ nkurow a asɛe mu.+ 8 Na sɛ mesɔ Egypt ase gya na n’aboafo nyinaa sɛe a,+ wobehu sɛ mene Yehowa. 9 Saa da no, metu abɔfo ma wɔde hyɛn akɔ, na wɔbɛma ɔhantanni Etiopia ho apopo.+ Na wɔn ho bɛdɛre wɔn Egypt ahoyeraw da no, na hwɛ, ɛbɛba.’+ 10 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mɛfa Babilon hene Nebukadresar nsa so ama Egypt dɔm to atwa.+ 11 Na mede ɔne ne man, atirimɔdenfo a wɔhyɛ aman so,+ bɛba abɛsɛe asase no. Na wɔbɛtwe nkrante wɔ Egypt so na atɔfo ahyɛ asase no so mã.+ 12 Mɛma Nil asuasu+ ayow adan asase kesee na matɔn asase no ama amumɔyɛfo,+ na mɛma ahɔho asɛe asase no ne nea ɛwɔ so nyinaa.+ Me Yehowa na maka.’+ 13 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mɛsɛe abosom fĩ+ no na mayi anyamehunu afi Nof,+ na obirɛmpɔn rentena Egypt asase so bio, na mɛma ehu aka Egypt asase.+ 14 Mɛsɛe Patros+ pasaa, mɛsɔ Soan+ ase gya na mabu Noh+ atɛn. 15 Mehwie m’abufuw+ agu Egypt abannennen Sin so, na metwa Noh+ dɔm akyene. 16 Mɛsɔ Egypt ase gya. Sin ho bɛdɛre no, wobebubu akɔfa Noh, na atamfo bɛba Nof so awia ketee! 17 On+ ne Pibeset mmerante bɛtotɔ nkrante ano, na nkurow no bɛkɔ nkoasom mu. 18 Sɛ miyi Egypt+ kɔndua fi hɔ a, esum beduru Tapanes.+ Na ne tumi mu ahantan to betwa.+ Omununkum bɛkata no so+ na ne ho nkurow akɔ nkoasom mu.+ 19 Mebu Egypt atɛn+ na wɔahu sɛ mene Yehowa.’” 20 Na afe a ɛto so dubiako, ɔsram a edi kan no da a ɛto so ason no, Yehowa ka kyerɛɛ me bio sɛ: 21 “Onipa ba, mebu Egypt hene Farao basa,+ na hwɛ, wɔrenkyekyere sɛ wɔresa no yare; wɔremfa ade nkyekyere so+ na anya ahoɔden de aso nkrante mu.” 22 “Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Me ne Egypt hene Farao anya asɛm,+ na mebubu n’abasa,+ nea ɛyɛ den ne nea emu abu no,+ na mɛma nkrante afi ne nsam atɔ fam.+ 23 Na mɛbɔ Egyptfo apete aman so na mabɔ wɔn apansam nsase so.+ 24 Mɛhyɛ Babilon hene abasa mu den+ na mede me nkrante ahyɛ ne nsam,+ mebubu Farao abasa na wasi apini+ wɔ n’anim te sɛ obi a wapira opirabɔne. 25 Mɛhyɛ Babilon hene abasa mu den na Farao abasa mu agow; na sɛ mede me nkrante hyɛ Babilon hene nsam na ɔde toa Egypt asase a,+ wobehu sɛ mene Yehowa. 26 Na mɛbɔ Egyptfo apete aman so+ na mabɔ wɔn apansam nsase so. Na wobehu sɛ mene Yehowa.’”